Tattoo dandelion iyo macnahooda | Tattoo
Shaki la'aan, waa mid ka mid ah sawirada ugu caansan gabdhaha iyo haweenka. Taasi waa sax, waan ka hadlaynaa Tattoo tattoos. Maaha markii ugu horreysay ee aan ka hadalno Tattoo Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'Tattoos' tan iyo sanadkii la soo dhaafay, lammaanahayga Maria Jose ayaa mar hore nooga warramay astaamaha ubaxdan quruxda badan ee jilicsan. In kastoo iyo waqtigaas, waxaan ka hadalnay aragti ka badan tan macnaha iyo astaamaha uu tatuuftani leedahay.
Taasina waa waxa aan uga hadli doonno qodobkaan, waxaan ku sharxi doonnaa astaamaha iyo macnaha taas Tattoo tattoos iyo sidoo kale sababaha uu qofku u soo qaban karo tattoo-kan maqaarkiisa. Dhanka kale, waxaan sidoo kale ku siin doonaa xoogaa fikrado ah si aan u helno tattoo asal ah oo ka duwan.
1 Maxaa loo yaqaan 'dandelion tattoos'?
2 Micnaha ruuxiga ah
3 Naqshadeynta Tattoo ee Dandelion
4 Tattoo dandelion oo leh xarfo
5 Halkee laga helaa tattoo dandelion
6 Qiimaha Tattoo ee Dandelion
7 Sawirrada Tattoos dandelion
Maxaa loo yaqaan 'dandelion tattoos'?
Hadda haddii aad go'aansato (ama go'aamiso) inaad tattoo a dandelionwaxaan filayaa inaad jeclaan lahayd inaad ogaato waxa tattooani astaan ​​u yahay iyo macnaheeda. Ubaxa dandelion waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan ee noqon kara, waxay ku baxdaa tiro badan iyo ficil ahaan gobol kasta oo adduunka ah. Waana taas, in kastoo ay umuuqato inaan kahadleyno tattoo astaan ​​u ah faro badnaanta, waxba kama jiraan xaqiiqda.
Jilicsanaantiisa iyo inay la xiriirto carruurta iyo dhallinyarada (dhammaantayo waan wada afuufnay qaar ka mid ah lugaha lugaha qaarkood) aan dambi lahayn, daahirnimo iyo nostalgia. Iyada oo ay taasi jirto, kama tagi karno suurtagalnimada in dad badani ay ubaxaan ubaxan si ay ugu matalaan daqiiqado qaas ah noloshooda ama xusuus aynaan doonaynin in xilligu dhammaado oo uu cirro noqdo oo aan caddayn.
Micnaha ruuxiga ah
Sida aynu si fiican u soo sheegnay, dambi la'aantu waa mid ka mid ah macnaha weyn ee ka muuqda tattoo sidan ah. Laakiin weli waan sii yara sii socon karnaa. Micnaha ruuxiga ah ee loo yaqaan 'dandelion tattoos' wuxuu isku xiraa nafteena xaadirka ah iyo wixii la soo dhaafay. Haa, waxay u ekaan kartaa xoogaa yaab ah laakiin maahan. Waa hab aan la iloobi karin xusuusta weyn ee carruurnimada, oo had iyo jeer lala xiriiro iyo dib-u-noqoshada waqtiyada farxadda leh, ama ugu yaraan, iyada oo aan lahayn dhibaatooyin waaweyn. Sixirka iyo rabitaanadu sidoo kale waxay kuxiranyihiin astaamaheeda. In kasta oo geedka laftiisa loo tixgeliyey sixir waqti kale, wejiga macnihiisa ayaan looga tagi doonin.
Masiixiyiinta waxaa lagu yiri sidaas warshadani waxay xidhiidh la lahayd jacaylka Ciise. La macno ah nasiib wacan oo had iyo jeer ku weheliya. Waxaan ka dhihi karno waxay noqotay astaan ​​wanaagsan oo isla markaasna la xiriirta badbaadada, bogsashada iyo firfircoonida.
Naqshadeynta Tattoo ee Dandelion
Waxaa ugufiican inaad fiiriso waxa dhameystiran dandelion tattoo gallery in aad hoosta ku haysato Dabcan, markay tahay kahadalka naqshadaha, waxaan aragnaa inuu jiro mid ka adkaanaya inta kale, ugu yaraan caan iyo tiro jeer oo la xardhay. Waana dandelion la afuufay oo ubaxyadiisiina isu beddeleen shimbiro yaryar.
In kasta oo aan xisaabta ku dareyno in tatuuxu yahay "mid aad loo arkaayo", shaqsiyan waxaan doorbidi lahaa wax ka duwan, haddaba, waxa aan hadda ka faalloon doonno ayaa ah aragti shakhsiyeed oo ka badan wax kasta oo kale. Dhankeyga, iyo hadii aan fikradeyda ka dhiibto qof raba inuu sameeyo tattoo dandelion, waxaan u sheegi lahaa inay doortaan qaab ka duwan, naqshad u eg biyo-biyood taabanaya waxyaabaha la taaban karo ayaa noqon kara mid aad u wanaagsan. Oo sidaasaan uga fogaanaynaa dandelion-ka caadiga ah oo leh shimbiro adhi ah.
Tattoo dandelion oo leh xarfo
Sida noocyada kale ee loo yaqaan 'tattoos', waxaan sidoo kale ku raaxeysan karnaa kala duwanaansho badan oo kan ah. Mid ka mid ah ayaa ah in la arko sida Tattoo dandelion oo leh xaraf kaalinta kowaad. Waxaa laga yaabaa maxaa yeelay marka lagu daro helitaanka dhammaan astaamaha aan soo sheegnay, waxaan ku darnaa macno cusub. Tan waxaan ku leenahay xarfaha sameysmi doona ereyo ama weedho qaarkood.
Waxa ugu caansan waa in la arko ereyo dhiirigelin ah ama weedho wanaagsan oo had iyo jeer na xusuusiya inaan waajib ku nahay inaan sii wadno dagaalka maalin kasta. Dabcan, waxaa ugu wanaagsan in la doorto jumlado gaagaaban si aysan u daboolin quruxda dandelion. Fikrad asal ah ayaa ah in la isku daro qaybta miraha waraaqaha shaqsiga taasi waxay sameyn doontaa eray. Xaaladdan oo kale, way fiicantahay haddii ay tahay magac habboon.
Halkee laga helaa tattoo dandelion
Sida macnaheeda kala duwan, dandelion sidoo kale wuxuu noqon karaa geesiga aagagga kala duwan ee jirkaaga. Kaliya waa inaad ogaataa inay la qabsan karto kuwa aad ugu jeceshahay.
On curcurka: In kasta oo aysan u ekaan karin, waxay u noqon kartaa tattoo fiican curcurka. Dabcan, xaaladdan, naqshadeynta dhirta lafteeda ayaa lagula talinayaa, oo qumman, oo kaliya dhowr iniinood oo ku wareegsan.
Garabka: Mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan waa tan, shaki la'aan. Garabku waa qayb ka mid ah jirka meesha tattoo dandelion uu isaga ku noqon karo sharaftiisa oo dhan. In ka badan wax kasta maxaa yeelay waxay yeelan doontaa qaab jiif ah, oo aan ku dheereyn karno abuurka oo ku dar iyaga xarfaha ama weedho aan soo sheegnay.
Qoorta: Aagga qoorta waa xarrago iyo dareen dareen isku mid ah. Taasi waa sababta haddii aad maskaxda ku hayso tattoo noocan ah, waxay ka sii fiicnaan doontaa. Cabirkiisu wuu yaraan doonaa, laakiin quruxdiisa maahan. Dhinacyada qoorta iyo dhegaha gadaashiisa aad baa loogu xushay in lagu qurxiyo dandelion.
At: Haddii aadan ka baqaynin xanuunka ku dhici kara shaatiga cagta, ka dib horay u soco. Shaki la'aan, waa mid kale oo ka mid ah meelaha ugu jecel inay muujiyaan naqshad sidan oo kale. Waxay sidoo kale noqon doontaa aagga dhinaca dambe ee aad ugu leh tan.
Canqowga: Tatoolooyinka canqowga badanaa waxay leeyihiin ikhtiyaar. Laakiin kiiskan, waxaan dooran doonnaa naqshad socota qurxinta aagga canqowga oo sii wad inay lugta kor u yara kacdo. Tattoo toosan oo soo jiidasho leh oo had iyo jeer ku habboon.
Feeraha: Rag iyo dumarba, tattoos feeraha Had iyo jeer waxay na siinayaan asal ahaan weyn, oo lagu daray waxay ku habboon yihiin naqshad ballaadhan. Dabcan, xanuunka sidoo kale u muuqda kiiskan ayaa maskaxda ku haya. Laakiin sidaas oo ay tahay, natiijadu waxay noqon doontaa tan ugu dareenka badan uguna mahadcelinta qalooca dabiiciga ah ee jirka Danqalluhu wuxuu ku biirayaa dareenka iyo quruxda ugu dambeysa.
Qiimaha Tattoo ee Dandelion
Qiimaha Tattoo-ka way ka duwanaan karaan xoogaa yar hal meel ilaa meel kale, iyo sidoo kale nooca tattoo ee aan ka hadlayno. Xaaladdan oo kale, sidoo kale waxaa jira kala duwanaanshaha cabbirka, iyadoo kuxiran meesha jidhka aan dooranay. Waxaan kuu sheegi karnaa in qiimaheeda uu socon karo laga bilaabo 80 euro ilaa in ka badan 110 euro.
Sawirrada Tattoos dandelion
Meesha ay ugu xanuun yar tahay in lagu sawiro: bartilmaameed meelahaas jirka ka mid ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo dandelion
Wax walba oo aad u xiiso badan! Laakiin waxaad adeegsataa jumladda "hadda sifiican" marar badan
Jawaab Xenia Valerko
Waad saxantahay Xenia, horey ayaan u cusbooneysiiyay boostada. Waa calaamado qoraal ah oo aan haysto waqtiga qorista mararka qaarkoodna qaabab sidan oo kale ah ayay igu ciyaaraysaa 😛
Waad salaaman tahay, Luz !.
Xaaladdan oo kale, jihada tattoo-gu ma beddeleyso macnaheeda, sida caadiga ah. Maaddaama macnaha uu ku saleysan yahay in badan oo ku saabsan astaamaha iyo midowga cunsurradeeda oo aan sidaa u sii weyneyn sida ay isugu habaysan yihiin qaabeynta ugu dambeysa. Meesha jidhka ah ee aynu qaadanayno waxay leedahay wax badan ama ka yar ruuxi ah iyo sidoo kale dabeecad shucuur leh, laakiin sidaan u leeyahay jihada lafteeda, ma saameynayso. 🙂
Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada.
Waa maxay daloolinta ugu quruxda badan
Micnaha tattoo saacado